Izinyathelo ezi-4 ezibalulekile lapho usebenzisa inja | Izinja Umhlaba
Ukuphathwa Komhlaba Wezinja | | Ukwamukelwa kwezinja
Nini sithatha injaNoma ngabe umdala noma usengumdlwane, sinokungabaza okuningi ngalokho okufanele sikwenze ukuze abe nempilo enhle futhi sibe nokuthula sijabulele ukuba naye. Lokhu kukhathazeka kujwayelekile, kusho ukuthi inja yakho izoba sezandleni zomuntu ozonaka ukunakekelwa okudingekayo. Nawa amathiphu ama-4 azokwenza konke kube lula nge ukuqala adventure yakho ndawonye.
1 Umsebenzi wephepha
2 Lungisa konke
3 Mthathe ayohlangabeza udokotela wezilwane
4 Izindlela eziqinile
Cishe ukhathazekile ngokuthi konke kuzohleleka maqondana nalokhu. Kuyisinyathelo okufanele sisenze kahle. Wonke umuntu uyazi ukuthi abangane bethu bezinja kumele ube ne-chip futhi ukhonjwe kahle ngemininingwane yethu ukuze siyithole ngokushesha uma ilahleka.
Kodwa-ke, okungabhekwa yiwo wonke umuntu, futhi okubaluleke kakhulu, wudaba lwe kuphephile ngezinja. Kunconywe ngokuphelele ngezizathu ezimbili. Esokuqala yisikweletu somphakathi. Ikakhulukazi uma inja yethu ayilawuleki noma ngisho nodlame oluncane, ngaphambi komthetho yithina esizophendula nganoma yimuphi umonakalo ongase ubange. Isizathu sesibili ukuvakashela kudokotela wezilwane. Ngeshwa kunezinja ezincane okufanele ziye kudokotela wezilwane kakhulu. Njengoba sazi, lokhu kuvakasha kungaba izindleko ezinzima ukusithatha uma singenakho okuhlelwe kahle.
Ngalezi zizathu nezinye kubaluleke kakhulu ukuthi imihlane yethu ihlanganiswe kahle kunoma yisiphi isimo, ngenxa yesilwane esifuywayo nesethu.
Ngaphambi kokuba umlingani wethu omusha afike ekhaya, kufanele sihlele izinto eziningana ukuze aphile kusukela ngomzuzu wokuqala futhi inqubo yakhe yokuzivumelanisa nezimo ishesha ngangokunokwenzeka.
Kuyinto ejwayelekile ukuthi ube novalo ekuqaleni, ngakho-ke kunconywa kakhulu lokho ake silungiselele indawo elinganiselwe lapho kunezinto ezimbalwa ezandleni zakho futhi awukwazi ukuzibhubhisa. Izodinga nendawo ethambile yokuphumula, ngokobungako bayo. Vele, kufanele ube nomthombo wokuphuza ohlala unamanzi ahlanzekile nesitsha sokudla. Thola kahle ngohlobo lokudla akudingayo futhi, uma kuvela endaweni yokukhosela futhi kungenzeka, mnike ukudla okufanayo ekuqaleni. Futhi lungiselela ithoyizi ukuze likwazi ukuzijabulisa. Ekugcineni, uma esewumdlwane futhi engakwazi ukuphuma ngaphandle, khumbula ukuthenga izimpahla zangaphansi.
Mthathe ayohlangabeza udokotela wezilwane
Akunandaba ukuthi isukaphi futhi ingakanani ubudala bayo, akufanele uyeke ukuyisa isilwane sakho kudokotela wezilwane. Ngokusobala kubalulekile uma ungakagomi futhi awukwazi ukuphuma okwamanje. Kepha kufanele ukwenze futhi uma esekhulile, noma ngabe ukubukeka kwakhe kunempilo futhi uvela endaweni yokuzethemba okuphelele kuwe.
La vakashela udokotela wezilwane Izokuvumela ukuthi uvule ifayela nokuxhumana kwakho kokuqala nochwepheshe onakekela impilo yakho. Emtholampilo, ucela ukuhlolwa okokuqala ukuze kuqinisekiswe ukuthi konke kuhamba kahle nokuthi unokuthula okuphelele kwengqondo. Kwesinye isikhathi, kungadingeka ukuthi uwususe umnyundu noma udokotela wezilwane akwazi ukuthola ezinye zezinkinga okufanele zibonwe ukuze zingabi nzima.
Konke lokhu kuzoba amaphuzu alula ukuwenza uma ulandela izincomo zethu zokuqasha umshuwalense wezilwane wenja yakho.
Yize ngezinye izikhathi kungabonakala kunzima nokuthi senza kube nzima isilwane sethu, kubaluleke kakhulu ukuthi kusukela ekuqaleni ake sibeke izikhathi eziqinile zokudla kanye namahora okuhamba ukuzikhulula. Umngani wethu omusha uzojwayela ngokushesha okukhulu futhi konke kuzoba lula kithina nakuye.
Indlela ephelele ye-athikili: Inja yomhlaba » Ukwamukelwa kwezinja » Izinyathelo ezi-4 ezibalulekile lapho usebenzisa inja
Abaphakela izinja: sikutshela konke